2019:Ntinye ihe ngosi - Wikimania
2019:Ntinye ihe ngosi
'Wikimania 2019 Stockholm' ga abụ nke ụgboro iri na ise ndi mba uwa nile na ezukọta kwa afọ ikpakọrita uka ihe gbasara arụmarụ Wịkịmidiya, ndi na aru ya, yana ndi na akwado ije nke a n'akpo "Free Culture".Ọgbakọ a ga amalite na ụbọchi iri na isi ruo ụbọchi iri na asatọ na ọwa Ọgọstụ (asatọ),na Mahadum nke a n'akpọ "Unịvasiti ọf Stọkoms" A ga enwe kwa ntakiri ọgbakọ nke ndi nka hakatọnna ndi ọzọ ga esonye, tụpụ enwe nzụkọ nke mmadu nile. Ntakiri nzukọ a ga amalite na ụbọchi iri na anọ ruo ụbọchi iri na ise na ọnwa asatọ. nhazi ntakiri nzukọ a na ọgbakọ nke ukwu di iche iche, ya mere na oku maka ihe ngosi a bụ maka nzụkọ nke mmadu nile.
Ụsoro oge iheomume
Oku maka ntinye ihe ngosi ga ebido na ụbọchi nke mbu na ọnwa ise
Oku maka ntinye ihe ngosi ga emechi na ụbọchi nke mbu na ọnwa isi Agbatia oge a ụbọchi itolu na owa isii
Nnabata na mbipụta atụmatụ na ụbọchi nke mbu na ọnwa asaa
Tụpụ ga etinye akwụkwọ ihe ngosi
Tụmadi ọ bụrụ na itinyela akwụkwọ maka ihe ngosi na nzukọ Wịkịmeniya na mbu, ozi ndi n'eso nke a ga bara gi uru.
Na 2019, agaghi enwe nani otu kọmitii ga ahu maka atumatu ma ọ bụ otu ụdi akwukwọ ndenye maka ihe ngosi, a ga etinye akwukwọ na okpuru isiokwu di iche iche ewepụtara na wịkị,nọ na okpuru. Mmewe atumatu nwere ụsoro oghere, oghere ndi a nwere ndi-isi di iche iche. Oghere nke ọbụla nwere isiokwu di iche, ndi isi oghere nke ọbụla na achọ ndenye gbasara isiokwu nzukọ. A ga họrọ nnọkọ ndi di mkpa ga aba uru na odinihu, ndi ga akwado mmekorita, na ndi ga egbo mkpa ndi ahuru anya. Ọ buru na ichọrọ itinye akwụkwọ, biko ga na ihuakwụkwọ nke gbasara ihe ichọrọ itinye ma pia akara itinye akwụkwọ ebe ahu.
Ọ dighi oke mkpa Itinye akwukwọ ihe ngosi nke ga eso isiokwu nzukọ a na nnọkọ nke a n'akpọ 'plenari posta seshọnụ'. i nwere ike itu aro maka udi nnọkọ nkea ma isoro linki nọ na okpuru. A ga atu aro gbasara Ntakiri okwu na hazie ya na oge nzukọ a.
Isi-okwu Wịkịmeniya 2019 ga bụ maka "Wịkịmidiya, Ihe Ọmụmụ n'anaghi ego na atụmatụ mmepe obodo ga adigide". (SDGs)"Oghere" nnọkọ ọbụla ga abụ ihe gbasara SDGs, nke isi-okwu ya di Iri na asaa, ma nyere aka tụzie aka ma ọbụladi otu isi ihe n'ime isi-okwu ndi a. I nwere ike imụ ihe nile gbasara ebumunuche na igwe internet, yana nkọwa otu arumaru Wịkịmidiya si mekuta ebumunuche ndi a na ihuakwukwọ nzukọ a nọ na intaneti na Wịkịmidiya ọ na etinye aka immeputa ebumnauche ndi a?.
A ga eji linki nọ na ihuakwụkwọ wiki, nke ndi nọ na okpuru na itinye akwụkwọ maka Wịkịmenịya 2019 yana nnọkọ a n'akpọ Posta seshonu. Matakwa na oghere nile eweghi otu ogologo oge, ma ọbụ ụlọ ha nile nha. Edesiri ha na ụsoro mkpụrụ okwu bekee.
Retrieved from "https://wikimania.wikimedia.org/w/index.php?title=2019:Submissions/ig&oldid=43044"